ဆလင်ဒါအဖုံးသံမဏိဝါယာကြိုးအထည် China Manufacturer
အော်တို Corrugatted ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
သန့်စင်ပြီးသို့မဟုတ် Defibering ပစ္စည်း
 လျ：86-311-80690567 အီးမေးလ်ပို့ရန်：Troy.l@huataogroup.com
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company , Organization
အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide , Africa , Americas , Asia , East Europe , Europe , Middle East , Oceania , Other Markets
ထုတ်ကုန်:81% - 90%
ဘက်ထရီ Pasting ခါးပတ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက္ကူစက်အဝတ် > ဆလင်ဒါမှိုဝါယာကြိုး > ဆလင်ဒါအဖုံးသံမဏိဝါယာကြိုးအထည်
Thread Diameter: 35（mm）
Uses: Cyliner Mould In Paper Machine
Operating Temperature: -40 ~ 500℃
Cylinder Diameter: 1.5m
Mesh Count: 16Mesh
ထုပ်ပိုး: Poly အိတ် & သစ်သားသေတ္တာ
ထွက်နိုင်ရေး: 100000 Square meter per year
Supply နိုင်ခြင်း: 200 Square meter per day
Huatao Group သည် သံမဏိဝါယာကြိုး များကို ဆလင်ဒါမှို၏အချင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။
ပါဝင်သည်: Dia 1.25M, Dia 1.5M, Dia 1.75M, Dia2.0M, Dia 2.5M ။
Cylinder မှိုဖုံးအထည်အလိပ်၏ Range ရေတွက် mesh: 10 ကွက်ကနေ 100 အ mesh ရေတွက်နူန်းကျော်ကျော်
ပစ္စည်း အက်ရှင်ဆလင်ဒါမှိုကြိုး : polyester / နိုင်လွန် / သံမဏိ
ဆလင်ဒါမှိုအတွက်ထော င့်ဖြတ်အဖုံး ၏ အသွင်အပြင် :
သံမဏိဝါယာကြိုး ကွက် P ကို hoto
1. Q: အမျိုးအစားကိုအတည်ပြုရန်ဘယ်လို?
၁) ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
၂) သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပိုမိုမြန်မြန်ပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများကသင့်အားအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များ ပေး၍ အသင့်တော်ဆုံးကွက်၊ ဝါယာကြိုး၊ အထည် / စကရင် / ခါးပတ်ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပါမည်။
2. Q: ငွေပေးချေမှုအသုံးအနှုန်းများကဘာလဲ?
A: T / T ကိုပိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ L / C ကိုလက်ခံတယ်။ ဒီတော့ pls ငွေပေးချေမှုနှင့်ပတ်သက်။ အခမဲ့ခံစားရသည်။
၃။ မေး။ ကုန်ပစ္စည်းဘယ်တော့ပို့မှာလဲ။
A: ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၁၅ ရက်အတွင်းပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အရေအတွက်ကများလွန်းလျှင်အလုပ်ချိန် ၂၀ မှ ၃၀ ခန့်ကြာလိမ့်မည်။
4. မေး: ထည်ဘယ်လောက်ကြာအသုံးပြုလိမ့်မည်နည်း
A: အချိန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုနှင့်စက်ရုံကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းကိုအခြားမည်သည့်တရုတ်ထက်မဆိုပိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၅။ မေး - ကုန်ပစ္စည်းရှည်လျားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အထုပ်သည်လုံလောက်ပါသလား။
ပင်လယ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုင်းအစတိုင်းကိုသစ်သား / သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်မည်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : စက္ကူစက်အဝတ် > ဆလင်ဒါမှိုဝါယာကြိုး
Cylinder မှိုအတွက် SS316L ထောင့်ဖြတ်အဖုံး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
100 ကွက်ဆလင်ဒါမှိုဝါယာကြိုး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆလင်ဒါမှိုအဖုံးဖုံးအက်စ်အက်စ်ဝါယာကြိုး Net အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cylinder မှိုများအတွက်သံမဏိကွက် - ထောင့်ဖြတ်ချုပ်ရိုး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cylinder မှိုစက္ကူစက်အတွက်သံမဏိမျက်နှာပြင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cylinder မှိုသံမဏိမျက်နှာပြင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်များအတွက်စုတ်ယူခြင်း Box ကို
ဖိအားမျက်နှာပြင် slot က Sceen ခြင်းတောင်း
စက္ကူပျော့ဖတ် Refiner သည်နှစ်ဆ Disc
မြင့်မားသောတသမတ်တည်း Pulper သည် Rotor
Pulley Belt Driven Pulst Chest Mixer လှုပ်ရှားမှု
စက္ကူ Pulping ပစ္စည်းပန့်
စက္ကူပြုလုပ်ရေးစက်အတွက် Disc Thickener
Highy အာရုံစူးစိုက်မှု / တသမတ်တည်းမျက်နှာပြင် Cleaner
16 ကွက်ဆလင်ဒါဝါယာကြိုးအသားတင် အက်စ်ယက်ကွက် သံမဏိအဖုံးထည် 60 ကွက်ဆလင်ဒါဝါယာကြိုးအသားတင် သံမဏိဆလင်ဒါဝါယာကြိုးကွက် 316 မော်ဒယ်ဝါယာကြိုးကွက် ကာဗွန်နိမ့်သံဝါယာကြိုး Gabion သေတ္တာ 304 အက်စ်အက်စ်ဝါယာကြိုးကွက်
မူပိုင်ခွင့်© 2020 HUATAO GROUP LTD All rights reserved ။